Fandaharana an-tsary, hoso-doko ary hoso-doko amin'ny nomerika | Famoronana an-tserasera
Nomena ny tsy fahazoana antoka raha ny resaka mampiasa rindrambaiko sasany ho an'ny sary sy ny hafa graphic design, Matetika ny mpamorona sy ny mpamorona dia manafika ny fisalasalana momba ny rindrambaiko tsara indrindra nahatonga azy ireo, firy ny programa misy, izay be mpampiasa indrindra.
Amin'ity toe-javatra ity dia hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ity lahatsoratra ity izahay, izay ny programa ampiasaina indrindra ho an'ireo sary, sary hosodoko ary sary.
1 Fandaharana ampiasaina matetika amin'ny sary nomerika
1.2 Fitaovana fandokoana mora SAI
1.3 Hosodoko, hosodoko nomerika madio
1.6 ArtRage, toy ny canvas tena izy
2 Inona ireo programa mety indrindra amin'ny fanaovana sary, sary ary sary hosodoko?
Fandaharana ampiasaina matetika amin'ny sary nomerika
Tsy misy isalasalana, ny tsara indrindra sy sarobidy indrindra amin'ny resaka fanaovana fanoharana satria feno tanteraka izy io, ny aleony rehefa miresaka manova sary nomerika, miasa koa amin'ny lamba fandokoana, mamela anao hamorona anao paintbrushes, mitahiry azy ireo, manamora ny palitao maro loko sy firafitra.
Raha miaina matihanina amin'ny sary ianao, ity rindrambaiko matanjaka ity dia mendrika hianarana sy hampiasaina, ahafahanao manao izay tianao rehetra. Mazava ho azy fa tsy maimaim-poana izany.
Fitaovana fandokoana mora SAI
Izy io dia misy interface tsotra sy tsotra izay manamora ny fianarany sy ny fampiasana azy avy eo. Ny rindrambaiko dia manasongadina ny sary sy sary hosodoko, manohana ny fanaingoana ny borosy, ny fanovana ny endrika sy ny endriny, ny habeny ary ny hakitroky ny làlana, manohana ny fampifangaroana loko, manampy ny lokony amin'ny loko ary azo atao ny manova ny toeran'ny lamba amin'ny fiasa tokana.
Ny matau-ny no stabilizer tsipika amin'ny alalàn'izany no hahatratraranao drafitra tonga lafatra amin'ny andrana voalohany. Manana ny vidiny ny fahazoan-dàlana, saingy mendrika izany.
Hosodoko, hosodoko nomerika madio
Ny fomba fanaony dia manondro sary hosodoko araka ny tokony ho izy, ny farany vita amin'ny loko dia manahaka tanteraka ireo loko akrilika na watercolors niasa tamin'ny lamba, afaka nanampy soson-loko watercolor na ranomainty ranoka hampitomboana ny zava-misy.
Mila solosaina manana fahaizana betsaka hiasa tsara, maha-izy azy fandaharana mendrika ny ilana azy.
Ity programa ity dia be mpampiasa manaova logo, kisarys, sns., nomena ny fahaizany manao sary vector, na izany aza, tena mety tsara amin'ny karazana sary hafa miaraka amina fikitika manokana.
Asongadin'izy ireo ho toy ny iray amin'izany ny penina kojakoja fototra ary ny fomba fanatratrarana fahasimbana. Anisan'ny Adobe Ary azo vidiana ho bundle na irery, miaraka amin'ny drafitra isan-taona na iray volana monja hanandramana.
Mety ho an'ireo tia sy mpamorona tantara an-tsary sy manga. ny rindrambaiko Ahitana ireo fitaovana ilaina amin'ny famoronana sary-tsirony mba hanandramana, hijerena fomba fijery ary hanoritra ny tsipika izay manahaka ny fihetsehana, ny hafainganam-pandeha sns. Saripika 3D izay ahafahanao manova ny fisehoan'ny tantara an-tsary.
Ny vidiny dia manonitra ny fiasan'izy io.
ArtRage, toy ny canvas tena izy
Miasa ho an'ny manaova sary hosodoko nomerika toy ny amin'ny lamba tena canvas, mifangaro amin'ny fotoana tena izy, tratra ny vokatry ny watercolors, ny menaka ary ny acrylics, manohana ny fanaingoana ny borosy izy, ny iray amin'ireo tohiny dia ny asa ny symmetrière izay ampiana ny sarin'ny lafiny iray rehefa manintona azy ianao.
Mety ho an'ny kisarisary, sary ary sary, manana interface tsotra somary tsotra izy ary manana borosy isan-karazany azo amboarina ary, raha tsy ampy izany dia azonao atao ny manao sary mihetsika flipbook.
Misy free version fa mihena raha tianao ho feno, dia mendrika ny aloa.
Izy io dia rindrambaiko tsotra sy mora raisina, mety tsara amin'ny fanaovana sary fohy, tsy manana safidy marobe izy io, izay tombony rehefa mifantoka amin'ny famoronana.
Inona ireo programa mety indrindra amin'ny fanaovana sary, sary ary sary hosodoko?
Ny sosokevitra dia ny fampifangaroana fandaharana 2 farafaharatsiny mba hanoloana ny iray tsy fananan'ny hafa, ny tsara indrindra araky ny hevitry ny manam-pahaizana.Photoshop sy SAI".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fandaharana an-tsary, fandokoana ary fanaovana sary amin'ny dizitaly
Tena tiako i Krita, loharano misokatra, miaraka amin'ny stabilizer trace, mifangaro sns.